Gentoo: Gini mere ị chọghị Gentoo ISO iji wụnye ya? | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
Ọfọn, anyị na-eru nso, ọ masịrị m ide obere akwụkwọ ndị a ọsọ ọsọ ka ha wee ghara inye m nsogbu maka anaghị ede ntuziaka n'oge a: p, mana ị ga-aghọta na enwere ọtụtụ ịkọwa na Gentoo na ịhapụ edemede ahụ agaghị eme m ọtụtụ ihe ọma ma ọ bụrụ na emesịa ha enweghị ike ịchịkwa ike niile ahụ.
1 Ihe oyiyi ISO:
2 The Gentoo ISO:
3 Dị mkpa?
4 Ihe m na-eme:
4.1 Igbe dị ka ụzọ nzọpụta:
5 Anwansi di na ogbo3
6 Na nchịkọta:
Ihe oyiyi ISO:
Anyị niile maara ihe oyiyi ISO (nke ọma anyị niile chere ihu nwụnye Linux ma ọ dịkarịa ala). Mbadamba ndị ahụ (ma ọ bụ dị obere dị ka nke Ubuntu) mbadamba na-echekwa usoro ntọala ahụ niile ma megharịa ya na igwe ọzọ.
The Gentoo ISO:
ISO Gentoo dị obere (270 Mb na ọnọdụ njikwa, 2 GB na ọnọdụ Live). Mana ọ bụrụ n ’ịkwụsị inyocha akwụkwọ nbudata nke ndị ọrụ, ihe mbụ ị ga - achọpụta bụ na obere pere mpe ma dị ndụ na - emelite obere oge. Ma ọ dịkarịa ala ma e jiri ya tụnyere ya ogbo 3 (nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa).
Iji bụrụ 100% eziokwu na ị, mba, ịkwesighi ibudata Gentoo ISO iji wụnye ya. Ihe ọzọ bụ, ndị nwara ya ga-ekwu, ọtụtụ oge ISO na-abịa na njedebe ole na ole (dịka ọmụmaatụ nkwado maka UEFI, ISO pere mpe enweghị nkwado UEFI). Ọzọkwa, ọ bụ naanị a console (onye na-eme 95% nke ha na-eme kwa console agwa gị) na e nwere ndị ka mma (dịkarịa ala mfe) ụzọ ime a zuru Gentoo echichi.
Kedu yo M na-eme:
Nke a bụ ihe nzuzo m nkebi… nkebi? ọ ga-abụ na ha na-eche ugbu a. Ee, nkebi. Kemgbe ụbọchị m na Arch, ana m enwekarị mmasị na MBR, yana akara a, emere m akpa m Arch nrụnye ma ebe ọ bụ na enwebeghị m nnukwu ọnụ ọgụgụ nkebi ma ọ bụ na emeela m boot abụọ na Windows, enweghị m mkpa mepụta sistem m na UEFI.
Ihe m nwere ugbu a na kọmputa m bụ otu 5 nkebi, ebe m dị umengwụ ide ha niile, lee, m na-ezitere gị foto nke diski m.
(Site n'ụzọ, ọ na-atọ m ụtọ igosi ihe m na-eji, ọ masịrị m naanị ikwu maka tiori, mana iji gosi ihe na-arụ ọrụ maka m, nke a nwere ike ọ gaghị adabara mmadụ niile mana ọ bụrụ na m nwere ike ịnyere aka n'okwu ndị ahụ, mee ka m mara )
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere m akụkụ 6 na draịvụ ike m, na-eji MBR enwere m ike ịnweta primaries 3, yana ekele maka agbatị m nwere ike ịgbakwunye ntakịrị SWAP na igwe m. Na mgbakwunye na nkewa m / ndekọ ndekọ ụlọ na nke mere na mberede, ozi m anaghị efu na sistemụ ahụ. Nke a bụ nnọọ ihe bara uru mgbe gị na kọmputa na-akwụsị na-arụ ọrụ nke enweghị ebe, ị pụrụ nanị wụnye site ọkọ na efego n'ụlọ gị na njedebe, a mpempe achicha 🙂
Dịka ị pụrụ ịhụ, dịka ezigbo nchedo ọ bụla, enwekwara m Kali Linux arụnyere, yana Arch linux bara uru mgbe niile. Ugbu a, m na-agwa gị otu m si eji ndị a.
Igbe dị ka ụzọ nzọpụta:
Dị ka ị nwere ike ịpụta site na aha ahụ, Arch m bụ eriri nnapụta mberede, mgbe ọ bụla ihe mere na Gentoo nke m na-enweghị ike ịrụzi site na Gentoo n'onwe ya, m banye Arch, gbagoo draịvụ ike Gentoo wee malite idozi ihe. Ọzọkwa, Achọrọ m egwuregwu a na-akpọ Bombsquad nke dị na AUR 😉 oge ọ bụla m nwere ike igwu ya na ezinụlọ m ma ọ bụ enyi m nwanyị na ndị enyi m. Site n'ụzọ, iji mee ka o doo anya, Igbe ahụ nwekwara GNOME ma ọ bụrụ na ị na-eche ma m hapụrụ ya na njikwa 😛
Ebe Gentoo achoghi ihe obula nke ya bu Media media, i nwere ike họrọ ya ebe etinyere ya, Arch, Ubuntu, CentOs, wdg wdg… o bughi ya? 🙂
Anwansi di na ogbo3
El ogbo 3 ọ bụ mpikota onu nke nwere osisi Linux niile dị mkpa iji wụnye sistemụ. Ọ bụ ekele na mbadamba nkume a anyị nwere ike ịwụnye ozugbo site na sistemụ arụmọrụ ọzọ. Nanị ọnọdụ iji jiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi bụ na ebe ugwu ahụ tọgbọ chakoo mgbe ị wụnye ma cheta na nke a ga-abụ mgbọrọgwụ anyị maka usoro Gentoo na-esote anyị ga-ewu. Iji nye gị ntakịrị echiche nke ihe igwe m na-ere na sistemụ gị, nke a bụ ego diski eji:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na 50 Gb ọ karịrị, ezughị oke m ga-asị, n'ime 50 ndị a, m na-eji 8 gb, gụnyere mmemme dị arọ dị ka Virtualbox, Google-chrome (o doro anya na ọ ga-adị na Nkesa nke nyere Chromebooks 😉) na nke ọma, GNOME m na programmụ ndị ọzọ, mana ka anyị hapụ isi okwu ahụ ...
Ozugbo ogbo 3, ihe niile dị mkpa bụ ịmalite ime retouching, mana anyị ga-ahapụ nke a maka ntuziaka gọọmentị 😛
Ọ dị mma, agwalarị m gị ntakịrị ihe banyere otu esi etinye Gentoo, ntụgharị ya na-enye ohere itinye ya site na distros dị iche iche (ihe m chere na ọ bụ mmadụ ole na ole nwere ike ikwu) ma n'otu oge ahụ ọ na-enye ohere ịwepụta ohere ọrụ belatara. Ugbu a, m na-eche banyere ide ederede ikpeazụ tupu ịmalite ntuziaka. Na ezi ijeụkwụ na m nwere ụbọchị ndị a, M na-atụ ndị ndu ga-abụ dị nnọọ anya 🙂 M nnọọ na-eme ka n'aka na e nweghị rụrụ nsọtụ tupu m amalite. Ekele,
PS: Iji lee ọkwa ndị ọzọ, chọọ nchọta karịa maka ode akwụkwọ makana ha agaghị ejupụta m na njikọ 😛
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Gentoo: Gini mere ị chọghị Gentoo ISO iji wụnye ya?
Are bụ ajọ mmetụta, ekwesịrị m ntụkwasị obi (Ọ dị mma, echeghị m nke ukwuu) na Ubuntu, n'ihi gị, aga m ekwesighi ntụkwasị obi na Gentoo
hahaha mma echiche a bụ ịnwale ihe ọhụrụ 🙂 Echere m na ọtụtụ ndị na-atụ ụjọ Gentoo n'ihi na ha chere na ọ bụ «siri ike», abịara m imebi egwu ndị ahụ 😉
Nwoke Rhombus Sock dijo
Otu ihe ahụ na-eme m, afọ 10 na-ekwesị ntụkwasị obi nye Ubuntu, ma ugbu a Gentoo na-eme m 1313.
Zaghachi Sock na nwoke nwoke na nwoke Diamonds
Ndi mmadu adighi acho otutu oghere maka ulo?
Na m maara site na distro ọzọ ma e wezụga gentoo ị nwere ike iwunye debian, funtoo na archlinux.
Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta 🙂 ugbu a ọ dịkarịa ala ama m. Amaghị m na ị nwere ike ime otu ihe ahụ na debian na arch, o doro anya na funtoo ee n'ihi na ọ bụ nwanne nke Gentoo 🙂 Ekele na ekele maka ịkekọrịta
Na debian ị nwere debotstrap, nke ga-abụ ebuild na gentoo, ị na-ebudata usoro ntọala debian na folda, mgbe ahụ ị ga-eme chroot, wụnye kernel na ihe ọ bụla. Archlinux aghaghi inwe bootstrap
Nke a na - ekepụta obi ụtọ karịa oge ikpeazụ nke Egwuregwu nke n'ocheeze you .. Daalụ ma nwee obi ụtọ !!!
hahahaha Edere m na ụnyaahụ ... ma ọ bụrụ na m gwara gị na m gafere nzọụkwụ 18 nke ndu ahụ ... oops, agbaghara m ya 😛 ekele,
Gentoo nwere ọtụtụ ihe gbasara. Enwere m olile anya na ha abughi nani post banyere ihe omimi a. Enwere isiokwu m ga - achọ ịmatakwu banyere, dịka isiokwu nke ihe nkpuchi masked, ọkọlọtọ USE dị iche iche, na ndị ọzọ.
Onwe m bịara Linux n'ihi ịmata ihe, na ịmata ihe na -eche anyị Linuxeros. Mana ndị na-eji Gentoo bụ ndị ọzọ na-achọ ịmata ihe.
Ọ dị mma, ntakịrị nke ahụ na ndị ọzọ ana m emetụ ya aka na ntuziaka nwụnye 😉 ugbu a, ọ bụrụ na mgbe nke ahụ gasịrị ị ka nwere obi abụọ, mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka ọkwa ọzọ, a ga-enwe ọkwa ọzọ 🙂 Ekele
Isiokwu gị dị ezigbo mma, ka anyị hụ ma m nwere ike iwunye ma gbaa ọsọ Gentoo (agbalịrị m ugboro anọ), na ihe na-agbanahụ m na-ada ada.
Soronụ, kelee na ekele
Ekele dịrị gị maka ịza ajụjụ, na ntuziaka na-abịa n'oge na-adịghị anya ka mmadụ niile nwee ike ịmalite igwu egwu na Gentoo 🙂 Greetings
Na nso nso a pc ohuru abanyela n’aka m nke m choro imuta, ihe edemede gi ekpebikwara m ịmalite igwu egwu na distro a, Gentoo vooooy pallaaaa!
Akwa! Yabụ mbọ niile m na-agba bụ 😛 jisie ike na pc gị yana enwere m olile anya na ndu m dere nwere ike inyere gị aka ịbanye ụwa nke Gentoo n'ụzọ dị mfe karị. Ekele 😉